आइतबारदेखि फेरि अनशन बस्दै डा. केसी – Shirish News
आइतबारदेखि फेरि अनशन बस्दै डा. केसी
नागरिक अभियन्ता प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई महाअभियोग लगाएर नहटाए आइतबारदेखि आमरण अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
पराजुलीले राजीनामा दिएर मात्र नपुग्ने बरु उनलाई छानबिन गरेर कारबाही नै गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व रहेको जनाउँदै डा. केसीले भने, ‘उहाँ सर्वोच्च जस्तो पवित्र ठाउँमा जानु नै अदालतको अपहेलना गर्नु हो ।’ कान्तिपुरमा खबर छ ।